အရမ်းချမ်းသာလာအောင် ဘယ်လိုကြိုးစားခဲ့ရတယ်ဆိုတာ ပြောပြခဲ့တဲ့ စမိုင်းလ်ရဲ့ ( ရုပ်သံ ) - Tameelay
အရမ်းချမ်းသာလာအောင် ဘယ်လိုကြိုးစားခဲ့ရတယ်ဆိုတာ ပြောပြခဲ့တဲ့ စမိုင်းလ်ရဲ့ ( ရုပ်သံ )
အရမ်းချမ်းသာလာအောင် ဘယ်လိုကြိုးစားခဲ့ရတယ်ဆိုတာ ပြောပြခဲ့တဲ့ စမိုင်းလ် ရဲ့( ရုပ်သံ )
နိုင်ငံကျော်အနုပညာရှင်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ စမိုင်းလ်ဟာ အနုပညာအလုပ်တွေကို အပြီးတိုင်ရပ်နားခဲ့ပြီးနောက် ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးကို ဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦး ဇောက်ချလုပ်ကိုင်နေပါတယ်။အခုဆိုရင် စမိုင်းလ်တို့ဇနီးမောင်နှံဟာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အရမ်းကိုအောင်မြင်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေ ဖြစ်နေပါပြီ။
သူတို့ဟာ အခုလို အောင်မြင်ဖို့အတွက် ဘဝမှာ ဖြတ်ကျော်ခဲ့ရတဲ့ အခက်အခဲတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မီဒီယာတစ်ခုနဲ့ အင်တာဗျူးမှာ အခုလိုပဲ ပြောပြလာခဲ့ပါတယ်။
“စမိုင်းတို့က အရင်ထဲက နိုင်ငံခြားမသွားခင်ထဲက အလုပ်လုပ်ကြတာပေါ့နော်။ ဟိုကို စမိုင်းလ်တို့နှစ်ယောက်လုံး ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာ အသက် 18 နဲ့ 19 ကြားလောက်ပဲ ရှိပါသေးတယ်။ဟိုရောက်တဲ့ အဆင်မပြေဖူး။ ဘာမှလဲ သိပ်မလုပ်တတ်ဖူး ။ ပြောရမယ့်ဆိုရင် ပညာလည်း မတတ်ဖူး။ အာ့တော့ ပထမဆုံး security စလုပ်ရတယ်။ တစ်နေ့ကို အပြင်ဖက်မှာ အေးနေတဲ့ကြားက 13 နာရီလောက်မတ်တပ်ရပ်ရတယ်။ကိုယ်ဝန်စရှိလာတာတောင် လုပ်ခဲ့တယ်။ သမီးကြီးကိုယ်ဝန်7လခွဲလောက်ထိ လုပ်ခဲ့ရတယ် လို့ ပြောလာပါတယ်။ ခြေထောက်သွေးကျတဲ့အထိ security အဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ရတယ်လို့ လဲ ပြောပြခဲ့ပါတယ်။
နောက်ပိုင်းမှာ မြန်မာပြည်က မိဘနဲ့ တယ်လီဖုန်းအဆက်အသွယ်လုပ်ရင်း ဘေဖိုးတွေက အရမ်းကုန်လို့ ပိုက်ဆံမပေးနိုင်ဘဲ ငိုခဲ့ရတဲ့အထိ အဆင်မပြေတွေကို ကြုံခဲ့ရပါတယ်။ အဲ့ဒီ အဆင်မပြေမှုဟာ နောက်ပိုင်းမှာ စမိုင်းလ်တို့ဇနီးမောင်နှံအတွက် အောင်မြင်စေမယ့် အခြေအနေတစ်ခုကို တွန်းအားပေးခဲ့ပါတယ်။ဈေးသက်သာတဲ့ ကိုယ်ပိုင် sim card တွေပြုလုပ်ရောင်းချပြီး ပြည်ပရောက်မြန်မာတွေ အခက်အခဲကို ဖြေရှင်းပေးခဲ့ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့ ဈေးကွက်က အဆမတန်ကြီးထွားလာပြီး လုပ်ငန်းတွေပါ တိုးချဲ့လုပ်ကိုင်ခဲ့တာ အခုဆိုရင် ကြော်ငြာလုပ်ငန်း ဆက်သွယ်ရေး လုပ်ငန်းအချို့နဲ့ မီဒီယာလုပ်ငန်းတစ်ချို့ကို ပါ လုပ်ကိုင်လာခဲ့ပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာ အောင်မြင်တဲ့အချိန်ကာလကို ရောက်ရှိနေသည့်တိုင် လင်မယားနှစ်ယောက်ကြားက ချစ်ခြင်းတရားတွေက လျော့မသွားပါဘူး။ ယနေ့တိုင် သူတို့ဇနီးမောင်နှံဟာ သူတို့အတွက်ထူးခြားတဲ့နေ့ရက်လေးတွေမှာ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ပျော်ရွှင်အံ့သြမှုတွေကို ယနေ့တိုင်ဖန်တီးနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ ဘာသာတရားကို ကြည်ညိုပြီး အလှူအတန်းရက်ရောတဲ့ သူတို့ဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦးရဲ့ ခက်ခဲတဲ့ ဘဝစာမျက်နှာတွေကို ဘယ်လိုဖြတ်သန်းခဲ့တယ်ဆိုတာ အောက်က ဗီဒီယိုဖိုင်မှာ ကြည့်ရှူလိုက်ကြပါဦးနော် ပရိတ်သတ်ကြီး။
အရမျးခမျြးသာလာအောငျ ဘယျလိုကွိုးစားခဲ့ရတယျဆိုတာ ပွောပွခဲ့တဲ့ စမိုငျးလျ ရဲ့( ရုပျသံ )
နိုငျငံကြျောအနုပညာရှငျတဈဦးဖွဈတဲ့ စမိုငျးလျဟာ အနုပညာအလုပျတှကေို အပွီးတိုငျရပျနားခဲ့ပွီးနောကျ ကိုယျပိုငျစီးပှားရေးကို ဇနီးမောငျနှံနှဈဦး ဇောကျခလြုပျကိုငျနပေါတယျ။အခုဆိုရငျ စမိုငျးလျတို့ဇနီးမောငျနှံဟာ မွနျမာနိုငျငံမှာ အရမျးကိုအောငျမွငျတဲ့စီးပှားရေးလုပျငနျးရှငျတှေ ဖွဈနပေါပွီ။
သူတို့ဟာ အခုလို အောငျမွငျဖို့အတှကျ ဘဝမှာ ဖွတျကြျောခဲ့ရတဲ့ အခကျအခဲတှနေဲ့ ပတျသကျပွီး မီဒီယာတဈခုနဲ့ အငျတာဗြူးမှာ အခုလိုပဲ ပွောပွလာခဲ့ပါတယျ။
“စမိုငျးတို့က အရငျထဲက နိုငျငံခွားမသှားခငျထဲက အလုပျလုပျကွတာပေါ့နျော။ ဟိုကို စမိုငျးလျတို့နှဈယောကျလုံး ရောကျသှားတဲ့အခြိနျမှာ အသကျ 18 နဲ့ 19 ကွားလောကျပဲ ရှိပါသေးတယျ။ဟိုရောကျတဲ့ အဆငျမပွဖေူး။ ဘာမှလဲ သိပျမလုပျတတျဖူး ။ ပွောရမယျ့ဆိုရငျ ပညာလညျး မတတျဖူး။ အာ့တော့ ပထမဆုံး security စလုပျရတယျ။ တဈနကေို့ အပွငျဖကျမှာ အေးနတေဲ့ကွားက 13 နာရီလောကျမတျတပျရပျရတယျ။ကိုယျဝနျစရှိလာတာတောငျ လုပျခဲ့တယျ။ သမီးကွီးကိုယျဝနျ7လခှဲလောကျထိ လုပျခဲ့ရတယျ လို့ ပွောလာပါတယျ။ ခွထေောကျသှေးကတြဲ့အထိ security အဖွဈ တာဝနျထမျးဆောငျခဲ့ရတယျလို့ လဲ ပွောပွခဲ့ပါတယျ။
နောကျပိုငျးမှာ မွနျမာပွညျက မိဘနဲ့ တယျလီဖုနျးအဆကျအသှယျလုပျရငျး ဘဖေိုးတှကေ အရမျးကုနျလို့ ပိုကျဆံမပေးနိုငျဘဲ ငိုခဲ့ရတဲ့အထိ အဆငျမပွတှေကေို ကွုံခဲ့ရပါတယျ။ အဲ့ဒီ အဆငျမပွမှေုဟာ နောကျပိုငျးမှာ စမိုငျးလျတို့ဇနီးမောငျနှံအတှကျ အောငျမွငျစမေယျ့ အခွအေနတေဈခုကို တှနျးအားပေးခဲ့ပါတယျ။စြေးသကျသာတဲ့ ကိုယျပိုငျ sim card တှပွေုလုပျရောငျးခပြွီး ပွညျပရောကျမွနျမာတှေ အခကျအခဲကို ဖွရှေငျးပေးခဲ့ပါတယျ။နောကျပိုငျးမှာတော့ စြေးကှကျက အဆမတနျကွီးထှားလာပွီး လုပျငနျးတှပေါ တိုးခြဲ့လုပျကိုငျခဲ့တာ အခုဆိုရငျ ကွျောငွာလုပျငနျး ဆကျသှယျရေး လုပျငနျးအခြို့နဲ့ မီဒီယာလုပျငနျးတဈခြို့ကို ပါ လုပျကိုငျလာခဲ့ပွီပဲ ဖွဈပါတယျ။
စီးပှားရေးလုပျငနျးမှာ အောငျမွငျတဲ့အခြိနျကာလကို ရောကျရှိနသေညျ့တိုငျ လငျမယားနှဈယောကျကွားက ခဈြခွငျးတရားတှကေ လြော့မသှားပါဘူး။ ယနတေို့ငျ သူတို့ဇနီးမောငျနှံဟာ သူတို့အတှကျထူးခွားတဲ့နရေ့ကျလေးတှမှော တဈယောကျနဲ့တဈယောကျ ပြျောရှငျအံ့သွမှုတှကေို ယနတေို့ငျဖနျတီးနဆေဲဖွဈပါတယျ။ ဘာသာတရားကို ကွညျညိုပွီး အလှူအတနျးရကျရောတဲ့ သူတို့ဇနီးမောငျနှံနှဈဦးရဲ့ ခကျခဲတဲ့ ဘဝစာမကျြနှာတှကေို ဘယျလိုဖွတျသနျးခဲ့တယျဆိုတာ အောကျက ဗီဒီယိုဖိုငျမှာ ကွညျ့ရှူလိုကျကွပါဦးနျော ပရိတျသတျကွီး။
ထိုင်းမင်းသမီးတွေကိုကျော်ဖြတ်ပြီး ခေါင်းဆောင်မင်းသမီးအဖြစ်ရွေးချယ်ခံရတဲ့ မေမြတ်နိုး
အမေရိကန်ဒါရိုက်တာ Deniel Zirilli ရိုက်ကူးသည့် Invincible ဇာတ်ကား Casting အတွက် Audition ၀င်ရာမှ ရွေး ချယ်ခံရပြီး ခေါင်းဆောင်မင်းသမီး နေရာမှ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်နေ ကြောင်းသရုပ်ဆောင်မေမြတ်နိုး ကပြောသည်။ ‘‘အဓိကသူတို့စကားပြော တဲ့ ပုံစံတွေကိုကြည့်တယ်။ မျက် နှာအနေအထားတွေကို ကြည့် တယ်။ ပြီးရင်သရုပ်ဆောင်ပြရ …
မယ်လိုဒီ ပြောတဲ့ သူမရဲ့ဝိတ်ချနည်း….
မယ်လိုဒီ ပြောတဲ့ သူမရဲ့ဝိတ်ချနည်း…. February 18, 2018 twa မယ်လိုဒီ ကအိမ်ထောင်ကျပြီးနောက် အဆမတန်တက်သွားတဲ့ဝိတ်ကို ဒီလိုရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးချခဲ့ပါတယ်။ ‘‘အိမ်မှာ နေ့တိုင်းကစားတယ်။ အစားဆို လွန်ခဲ့တဲ့လကဆို တစ်လလုံး ထမင်းမစားဘူး။ ပေါင်မုန့်အညိုတို့၊ သကြားဆိုမစားရဘူး။ နို့တို့ ဘာတို့ မစားတော့ဘူး။ အသီးအနှံမစားတော့ဘူး။ အသီးအနှံထဲက စားလို့ရတာက …
နန်းဆုနဲ့ G-Fatt တို့စုံတွဲလေးကတော့ ပရိသတ်တွေရဲ့ ချစ်ခင်မှုရရှိထားတဲ့ အဆိုတော်လေးနဲ့ ရွှေမင်းသမီးစုံတွဲတစ်တွဲလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ စုံတွဲသီချင်းလေးတွေလည်း ထွက်ရှိထားတဲ့ သူတို့စုံတွဲစတင် တွဲခုတ်ချိန်တုန်းက G-Fatt က အသားညိုသူဖြစ်ပြီး နန်းဆုက ဖြူဖွေးဥနေတာမို့ ပရိသတ်တချို့ မလိုက်ဖက်ဘူးလို့ ပြောဆိုမှုတွေ ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အခုတော့ G-Fatt …